🪁 प्रकृति र बाहिरी जीवन | Hultsfred मा जानुहोस्
बाहिर हुनु भित्र छ!
यो बाहिर हुनको लागि भित्र कहिल्यै भएको छैन। आफ्नो बाहिरी बसाइलाई साहसिक बनाउने अवसर किन नलिनुहोस्! अछुत प्रकृतिमा प्याडल गर्नुहोस्, Dackestupet तल घुमाउनुहोस्, एक समर्थक जस्तै माछा वा शान्ति र शान्त आनन्द लिनुहोस्। यहाँ सबैको लागि प्रकृति र बाहिरी जीवन छ!
Jernudden को शिकार र प्रकृति अनुभव
Jernudden शिकार र प्रकृति अनुभव। स्थानीय कम्पनीहरूसँगै, जेर्नउदेनले विभिन्न प्याकेजहरू प्रदान गर्दछ जुन शिकार, अनुभव, आवास र खाना समावेश गर्दछ। प्याकेजहरूको उदाहरण बक शिकार गियर शिकार संग
More kastell हल्ट्सफ्रेड र Högsby को नगरपालिका बीचको सिमानामा अवस्थित Småland मा एउटा खाडल हो। यहाँ स्म्याल्यान्डको ग्रान्ड क्यान्यनको शक्तिशाली चट्टानहरूमा रक शेल्फहरू छन्
हम्मरसुनको सौना र तातो टब
Hammarsjön को सौना र तातो टब Stora Hammarsjö क्षेत्रमा अवस्थित छ। यदि तपाईं केहि विशेष अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले Hammarsjön को सौना र तातो टब प्रयास गर्नुपर्छ। यहाँ दाउरा जलिरहेको छ
Bjärkhult को फार्म
Bjärkhult को सुन्दर प्रकृति मा घोडा प्रशिक्षण अनुभव! Bjärkhult Småland idyll को बीचमा पहाडमा अवस्थित एउटा शान्त सानो गाउँ हो। राइडिङ एरिनाबाट जहाँ तालिम लिइन्छ